Akụkọ - Ngwa nke wayo ngwa ngwa
A na-emepụta ngwa ngwa site na limestone nwere ngwakọta nke calcium na magnesium carbonates.
A na-emepụta calcium ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa na dolomitic ngwa ngwa site na kpo oku a na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na ikpo ọkụ ruo ogo 900 degrees. A na-ezo aka na usoro a dị ka usoro ịkụzi usoro.
Ngwa ngwa ngwa a na-akụkarị ike dị mma a na-akpọ PULVERIZED QUICKLIME nke dị mma maka ịgwakọta na mgbakwunye ma ọ bụ ihe ndị ọzọ iji rụpụta ngwakọta ngwakọta pụrụ iche. N'ihi ọdịdị kemịkal nke ụfọdụ mgbakwunye, ngwa ngwa nwere ike bụrụ "Fluidized", ya bụ, ịnwe akụrụngwa nke ịdị oke mmiri. Igwe mmiri a na-eme ka mmiri dị ọkụ dị mma maka ojiji ya na sistemụ njikwa ihe pụrụ iche maka ịmịcha mmiri kacha mma yana iji zere ikpuchi.
Enwere ike iji mmiri mee ihe ngwa ngwa ngwa ngwa, na usoro a na-akpọkarị slaking, na-akpata HYDRATED QUICKLIME (ma ọ bụ calcium hydroxide), ngwaahịa na-enweghị ntụ na-agba mmiri na-abaghị uru nke bara uru na nke ọma maka ọtụtụ ojiji.
Enwere ike iji ya dị ka ihe nyocha, ihe nyocha nke spectral, usoro phosphor. Enyemaka ihe mgbaze, ihe ndị na-eme ka mmanụ na-achọ mmanụ, nyocha gas, nke ejiri na carbon dioxide absorber. Lot reagents eji na semiconductor mmepụta nke denotation, na mgbasa usoro.
1) Jiri na ụdị ọ bụla nke nri mmako calcareous ibu-erute 55,6 n'elu bụghị ifọnke mejuputara
2) Na-eme ka osisi plastik, ụlọ ọrụ rọba, ụlọ ọrụ mkpuchi, ụlọ ahịa nchekwa mmiri na-ekpuchi mmiri na n'ime na n'èzí mgbidi ọcha. Albedo n'elu ogo 85.
3) Na-eji na ịme mkpọchi bọọdụ, daa na mmiri pipeline, ụlọ ọrụ kemịkal. Albedo n'elu ogo 93.
4) Nwere ike iji ya na-ete ezé, ncha. Albedo na 94 ogo n'elu
5) Na-eji na roba, plastik, eletriki USB, pvc albedo na 94 ogo n'elu
6) ịkwanyere, Pee, na agba, mkpuchi larịị ngwaahịa, na-ede akwụkwọ na-agbasa, na-ede akwụkwọ na-agbasa, albedo n'elu 95 degrees. Nwere, akwa albedo, nke anaghị egbu egbu, enweghị isi, ihe mkpa mmanụ dị mkpa iji dị ọcha dị elu, ogo ike adịghị ala.
Calcium oxide na Calcium hydroxide, Ime Calcium hydroxide, Aha Azụmaahịa nke Calcium Oxide, Calcium hydroxide akụrụngwa, Calcium hydroxide Production Line akụrụngwa, Calcium Hydroxide Ime,